Zokutya, Kits amacephe
Iikomityi, Imigqomo, .K, zokutshiza
Iiglavu & Bafikayo
Amaxabiso ethu kuxhomekeke kutshintsho emalunga ikrwada iindleko eziphathekayo kunye neminye imiba emarikeni. Siya kuthumela kuwe uluhlu lwamaxabiso oluhlaziyiweyo emva inkampani yakho uqhagamshelane nathi ukufumana ingcaciso engaphezulu
Ewe, sifuna wonke umyalelo worths ubuncinane $ 1000, kunye nobungakanani ngento nganye ukuya 100,000pcs.
KANJALO. Thina R strong & iqela D, mveliso isiko-ezenziwe apha naphaya ukuze zilungele iimfuno zakho.
Zeziphi beenkampani ezinkulu abathengi zenu / ezinkulu kwilizwe lethu / regiorr?
Thina ngaka eninzi abathengi ehlabathini lonke, kodwa thina asikwazi zityhila ngakumbi iinkcukacha zabo eziyimfihlo.
Kuba iisampuli, ixesha yipeyinti malunga 7 iintsuku. Kuba production mass, ixesha phambili ziintsuku 20-30 emva kokufumana intlawulo yedipozithi. Amaxesha akhokelayo kusebenza xa (1) siye safumana idipozithi yakho, kwaye (2) sinayo imvume yakho yokugqibela umgangatho isampuli & wobugcisa design.In zonke iimeko siya kuzama kumelana neemfuno zakho. Kwiimeko ezininzi akwazi ukwenza loo nto.
T / T. 30% imali kwangaphambili,-70% eseleyo nxamnye ikopi B / L.
D / P emehlweni (amaxwebhu ngokuchasene emehlweni intlawulo).
O / Kwiintsuku ezingama-60 (akhawunti ivuliwe) kwi okuhle abathengi banokuthenjwa.
Siyakuqinisekisa ukuba zonke izinto ezisetyenziswa iiplastiki processing kunye neepakethe zoba kwibakala ukutya. Njengoko BSCI, Sedex wacela ilungu, BRC, GMP, IS022000, HACCP mveliso eqinisekisiweyo, siya committedto ngokunikezela iimveliso ezisemgangathweni, wayethetha elingumthombo kunye ukusombulula zonke umba umgangatho kwakwenziwa isicelo soko.
Ngaba ukuqinisekisa ngumngundo imali abathengi ekhuselekileyo ekhuselekileyo '?
Ukuba nayiphi na bathengi nokutyala ngumngundo, siya kumhlonela nokukhusela imidla yawo kunye IPR (Intellectual Rights Property), ngumngundo zabo kuphela akayi kuza kusetyenziswa kwenye indawo odolo zomnye.
Kuba sample-ukuzithoba, imirhumo yokuthumela ziyahluka ukusuka $ 40 ukuya $ 80.
Kuba LCL and FCL imithwalo, imirhumo eenqanawa zixhomekeke iIncoterms ezikhethiweyo kunye forwarders.
Siza khona 122th Canton Fair